‘रु ६० को औषधि दुई हजार ४०० मा बिक्री ! कस्तो कार्वाही हुनुपर्छ यस्ता व्यवशायीलाई -प्रतिक्रिया दिनुहोस् – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Hot News/‘रु ६० को औषधि दुई हजार ४०० मा बिक्री ! कस्तो कार्वाही हुनुपर्छ यस्ता व्यवशायीलाई -प्रतिक्रिया दिनुहोस्
प्रायः सबै मेडिकलहलमा चिकित्सकको सिफारिसबिना अवैधानिकरूपमा औषधि बिक्री गरेको पाइएको शाखाले जनाएको छ । प्रतिवेदन तयार गरी जिल्ला प्रशासन तथा जनस्वास्वास्थ्य कार्यालयमा जानकारी गराउने तथा ती सबै पाँच मेडिकललाई लिखित स्पष्टीकरण तथा कारवाहीका लागि नगर स्वास्थ्य शाखाबाट पत्रचार गर्ने निर्णय भएको नगरप्रमुख शेर्पाले जानकारी दिए ।
बिहान सम्म देखिएको ठोरी स्थित सिता गुफा नजिकैको सीमा स्तम्भ एकाएक गायब ! कसले उखेल्यो ?